गर्भको छोरी तुहाउने, चाडबाडमा चेली चाहिने ?  OnlineKhabar
एक सहकर्मी गर्भवती थिइन् । उनलाई डाक्टरले बडादशैंको फूलपातीको दिन आमा बन्ने समय तोकिदिएका थिए ।
उनी भने आफ्नै खालको पिरलोमा थिइन् । उनी भगवानसँग पूकारा गर्थिन्, ‘मेरो पहिलो बच्चा छोरा नै होस्, छोरी जन्मियो भने त फेरि अर्को बच्चा जन्माउनैपर्छ ।’
काठमाडौंको पढेलेखेको परिवारकी बुहारी भए पनि परिवारमा नातिकै चाहना थियो । ८४ वर्ष पुगेकी जिजु हजुरआमा समेत पनातिको मुख हेरेर स्वर्ग जाने बताइरहन्थिन् । अझ उनकी सासूले त बुहारीले पक्कै नाति नै जन्माउँछे भन्दै सपनामा यस्तो देखेँ, उस्तो देखेँ भनेर सुनाइरहन्थिन् ।
‘मेरा त दुई वटै छोरीले छोरा पाएका छन्, छोराको पनि छोरै जन्मिन्छ’, छिमेकी र आफन्तसँग सासूको यस्तै संवाद हुन्थ्यो । बच्चा जन्मनासाथै नयाँ लुगा लगाउन हुँदैन भनेर उनले नन्दका छोरा (भान्जा) लाई साना भएका कपडा पोको पारेर राखिसकेकी थिइन् ।
यता साथी भने घरमा छोराको भूत चढेको देखेर आत्तिएकी थिइन् । बच्चा जन्मने दिन नजिकिँदै जाँदा उनको मुटुको ढुकढुकी बढिरहेको थियो ।
काठमाडौं बाहिर घर हुने हामी दशैंमा घर गयौं । पूणिर्मापछि कार्यालय जाँदा थाहा भयो, उनी त फूलपातीकै दिन छोरीकी आमा बनिछन् । पहिलो पटक आमा बने पनि उनले कसैसँग पनि खुसी साटिनन्, सम्पर्कमै रहिनन् ।
सानो कुरामा पनि फुरुंग हुँदै फेसबुकमा फोटो पोस्ट गर्ने साथीका श्रीमानले पनि अझैसम्म कुनै स्टाटस पोस्ट गरेका देखिँदैथे । आमा बनेकी साथीको अत्तोपत्तो थिएन । सम्पर्क गर्न खोज्दा उनको मोबाइल अफ थियो । कोही आफन्तले उनको फेसबुक एकाउन्टमा छोरीको सुन्दर फोटो ट्याग गरिदिएको थियो, कमेन्टको ओइरो थियो । तर, खास खुसी हुनुपर्नेहरु खुसी थिएनन् ।
धेरै प्रयासमा साथीसँग फोन सम्पर्क भएपछि बधाई दिएँ । तर, उनले कुनै प्रतिक्रिया दिइनन् । किन नबोलेकी भने दोस्रो प्रश्न गरेपछि बल्ल उनी बोलिन्, ‘के को बधाई साथी ? एकातिर दशैं रोकियो, आफन्तले टीका लगाउन पाएनन् । अर्कातिर छोरी जन्मिई ।’
उनी छोरीको आमा भएकोमा आफूलाई अभागी मानिरहेकी थिइन् र पंक्तिकार छोराकी आमा भएकोमा निकै भाग्यमानी ठानिरहेकी थिइन् ।
साथीले आफू छोरी भएको कुरा बिर्सिइन् । छोरा नै जन्मियोस् भनेर कामना गर्ने उनका घरका मान्छेहरुले आफूलाई आमाले धरती टेकाएको बिर्सिए । सबथोक बिर्सेर अबोध शिशुलाई तुलनाको माध्यम बनाए ।
छोरी जन्माएकै कारण उनलाई घरका मान्छेले न्वारान नगरीकनै माइत जान दबाब दिए । शहरको यो कस्तो सभ्यता ! राजधानी जस्तो ठाउँमा त छोरा र छोरीमा यस्तो विभेदपूर्ण सोच राखिन्छ भने गाउँमा हाम्रा आमा-हजुरआमाले छोराको आसमा दर्जनौं छोरीको ताँती लगाउनु खासै नौलो लागेन । यस्तै मानसिकता भएकाहरुले हो, गर्भमै छोरीको हत्या गर्ने अनि औंसी-पूणिर्मामा टीका लगाइदिन छोरी-चेली खोज्दै अर्काको घरमा धाउने ।
सन्तान नहुनेलाई सोध्दा हुन्छ, छोरीको महत्व । एउटा मात्र छोरी भइदिएको भए निःसन्तानहरुको मनमा कति खुसी छाउँथ्यो होला ! छोराहरुबाट परित्यक्त भएर वृद्धाश्रममा जिन्दगी बिताएकाहरुलाई सोधे हुन्छ, छोरी नहुँदाको पीडा । कम्तिमा छोरीले बा-आमालाई वृद्धाश्रममा छाड्दैनन् भन्ने पाठ त्यहाँबाट सिकिन्छ ।
छोरालाई जति अवसर दिने हो भने हरेक छोरीले केही गर्न सक्छन् । समाजमा सफल छोरीहरूको संघर्षलाई एकपटक नियाल्न म ती साथीका श्रीमान् र घरपरिवारलाई सल्लाह दिन्छु । उनका श्रीमान् ठूलै अफिसका माथिल्लै तहका कर्मचारी हुन् रे । तर, सोच निकै निकृष्ट रहेछ ।
धेरै समय भएको छैन, छिमेकी मुलुक भारतको एक उच्च घरानाकी महिलाले आफ्नो दोस्रो सन्तान छोरी जन्मिएको भन्दै हत्या गरेको । आठ वर्षकी छोरी हुर्काइसकेकी उनलाई दोस्रो सन्तान जुनसुकै हालतमा छोरा नै हुनैपर्छ भन्ने चाहना थियो । छोरो जन्मियोस् भनेरै उनले होम, व्रत सबथोक गरिन् । तर, उनको गर्भबाट छोरा जन्मिएन ।
छोरी जन्मिएको चार महिनापछि उनले आफ्नै सन्तानको हत्या गरिन् । एउटी आमाले छोरी भएकै कारण यतिसम्म कठोर कदम चाल्न सक्छन् भने अरु हिंसाको के कुरा गर्नु ! नौ महिनासम्म कोखमा राखेको र चार महिनासम्म लालनपालन गरेको छोरीको एकरत्ति माया लागेन ती निर्दयी आमालाई । आफूलाई जन्म दिने आमा त छोरीको लागि आफ्ना हुँदैनन् भने महिलामाथि हिंसा भयो, अन्याय भयो भनेर कसलाई सुनाउने ?
छोरा र छोरी समान हुन् भन्ने भावना जबसम्म आमाको आत्मामा हुँदैन, तबसम्म महिलामाथिको हिंसा समाजमा रोकिँदैन । हामी महिला हिंसाबारे निकै आलोचना गर्छौं, तर परिवारमा छोरा र छोरीलाई बराबरी व्यवहार गर्दैनौं । छोराले जे गर्दा पनि जायज हुन्छ त्यही कुरा छोरीले गर्दा नराम्रो हुन्छ ।
छोरीले कहिल्यै यस्तो गर्नु हुँदैन, त्यस्तो गर्नुहुँदैन भनेर नियम र बन्देज सुनाइन्छ । यिनै कुराबाट छोरीको मानसिकता बन्छ, म छोरी मान्छे पो हुँ, मेरो सीमा निकै साँघुरो छ । उता छोराको दिमागमा भने आफूले जे गरे पनि परिवारमा जायज हुुन्छ भन्ने मनस्थितिको विकास हुन्छ ।
अपठित समाज र चेतनाको अभाव भएका मान्छेहरुको कुरा छाडौं, पढेलेखेका खानदानी परिवारमै छोराको लागि मरिहत्ते गरिएको पाइन्छ । छोराकै चाहनामा छोरीको भ्रुणहत्या जस्तो अमानवीय कार्यले पश्रय पाइरहेको छ ।
राजधानीकै स्थायी बासिन्दा एकजना चिनजानकै दिदी छन्, उनको पहिलो बच्चा पाँच वर्षकी छोरी छ । दोस्रो बच्चा उनले छोरा नै जन्माउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि उनले तीन पटकसम्म गर्भपतन गराइसकेकी रहिछन् ।
उनले पीडा सुनाइन्, ‘एउटा छोरा भइदिएको भए यत्रो सास्ती हुने थिएन । तीन पटकसम्म पाठेघर सफा गर्दा लखतरान भइसकेँ । अचेल त उठ्दा-बस्दा पनि खुइयय हुन्छ !’
मन चसक्क भयो । कति सम्पन्न छ उनको घरपरिवार । सबै जना पढेलेखेका छन् । तैपनि मानसिकतामा सबै गरिब रहेछन् । ती दिदीले ‘सम्पत्ति खाने नाति खलकै हुने भएन’, ‘एउटा नातिको मुख नहेरी मरे अगति परिन्छ रे’ भन्ने जस्ता कुरा निरन्तर सुन्नुपरेर तनाव खेप्नुपर्छ ।
सासू-ससुराले सानी पाँच वर्षीया नातिनीलाई सधैं भन्दा रहेछन्, ‘तेरो भाइ कहिले आउँछ नानी ? भाइको नाम के राख्छेस् ? तिहारमा भाइलाई टीका लाउँथिस् होला, खै तेरी आमाले कहिले भाइ पाउने हो ।’
हजुरबा-आमाको यस्ता प्रश्नले छोरीले समेत आमालाई सोध्न थालिछे, ‘मामु मलाई भाइ खै त ? भाइ कहिले ल्याइदिने हो ?’
सबैतिरबाट एउटै कुराको करकरले दिदी आजकाल डिप्रेसनमा रहिछन् । औषधि नै खान थालिछिन् । प्रेसरको समस्या पनि छँदै छ ।
छोरीहरुले गर्भमा छँदादेखि जन्मिएपछि हरेक समय तगारोको सामना गर्नुपर्ने यो कस्तो समाज हो हाम्रो ? जन्मिन र सुरक्षित रुपमा बाँच्न कति वटा तगारो पार गर्नुपर्ने हो ? मुलुकी ऐनको ज्यानसम्बन्धी महल (२८) ग मा गर्भमा रहेको भ्रुणको लिंग पहिचान मात्र गराउनेलाई ३ देखि ६ महिना कैद र पहिचान गरी गर्भपतन गराउनेलाई ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था रहेको छ । तर, परिवार र पतिको सल्लाहबाट गर्भपतन गराउने भएकाले यस विरुद्ध कुनै पनि महिलाले उजुरी गर्दैनन् ।
महिलाको ज्यानलाई बच्चाको लिंग पहिचानको लागि पटकपटक प्रयोगशाला बनाइएको छ । संविधानमा प्रजनन अधिकारमा महिलाको हक हुने व्यवस्था छ । तर, सामाजिक व्यवहारमा भने लिंग पहिचानपछि छोरा जन्माउने जिम्मेवारी मात्र दिए झैं देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा महिलाले कहिलेसम्म रहनुपर्ने हो ?
२०७३ पुष २२ गते १०:३८ मा प्रकाशित
सामाजिक बिषयमा कलम चलाउने यमुना अर्याल अनलाइनखबरकी स्तम्भकार हुन् ।
gyanu shah लेख्नुहुन्छ | २०७३ पुष २२ गते १३:०१
yak dam ramro kura yamuna ji
laxmi paudel लेख्नुहुन्छ | २०७३ पुष २३ गते ८:४२
Thank you for contemporary issue which is great problem in Nepali culture.I think, Parents satisfied having only two daugters, thay me be model in society.So it needsaresearch about parents of two daugters in Kathmandu and flourish their happiness and proudness in entire the nation.
jamuna kc लेख्नुहुन्छ | २०७३ पुष २३ गते १८:४३
Heart touching article Yamuna ji
manita thapa लेख्नुहुन्छ | २०७३ पुष २३ गते १८:४४
Owo this is reality of our society
Sapana लेख्नुहुन्छ | २०७३ पुष २३ गते २३:१२
Absolutely, I had felt same like yours no any differnce in each words.. My mother in law blessed me to bring my grand son. I felt so pressure on my cs time and playing so much things in my mind. After havingagirl I could not express my feelings because that pressure on me..but now my husband and I have decided to not have another baby. Now I listen others who shows interest that we should have another baby… And I immediately say ok.. But my mind and heart answer themabig NO…
lokendra bc लेख्नुहुन्छ | २०७३ पुष २४ गते १४:१३
xori ra xora bubai bararari hu bhanna bhabana hunu parcha .